Impasse fizahantany: tsy afaka mijanona na mandeha
Home » Lahatsoratra farany farany » Tourism » Impasse fizahantany: tsy afaka mijanona na mandeha
Vaovao • fanorenana • Tourism • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Ny indostrian'ny hotely, fizahan-tany ary fizahan-tany dia nandray anjara tamin'ny fanaparitahana ny valanaretina COVID-19, indrindra ny zotra fitaterana an-dranomasina sy ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka; na lehibe aza ny andraikitr'izy ireo, ireo orinasa ireo dia tsy azo ampamoahina amin'ny fiaviany na amin'ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny governemanta sy ny sampan-draharahan'ny fahasalamana manerantany amin'ny famantarana, fanalefahana, fanaraha-maso ary fanafoanana ny viriosy.
Afeno aloha, avy eo solafaka
Nanomboka tamin'ny famantarana voalohany ny siansa nataon'ny mpahay siansa sinoa, hatramin'ny fanekena (fa tsiambaratelo) an'ny governemanta sinoa ka hatrany amin'ireo dingana tsy mendrika nataon'ny World Health Organization, io virus io dia niteraka krizy ara-pahasalamana sy toekarena tsy niainana nandritra ny 100 taona mahery. Ny mpitondra firenena maro dia naka, ary manohy mandray, mijery tsy misy dikany ny fikarohana sy ny statistikan'ny virus. Ny mpitondra eran'izao tontolo izao, toa an'i Donald Trump, dia aleony tsy miraharaha ilay virus, satria mino fa ho afaka irery izany. Nanomboka tamin'ny volana Janoary ka hatramin'ny voalohan'ny volana martsa dia nanamafy hatrany i Trump fa "voafehy" ilay virus ary "hanjavona" ao anatin'ny volana mafana kokoa ary manohy mino izy fa hanjavona ary / na efa nanjavona.
playht_player width = "100%" haavony = "175 ″ feo =" Noa "]
Tsy irery i Trump amin'ny fampiharana ny kanton'ny Magical Thinking. Tany Brezila, ny filoha Jair Bolsonaro dia nampitaha ny virus taminà sery iray ary nanohitra ny maha-marina ny halaviran'ny fiaraha-monina. Ny filoha Iraniana, Hassan Rouhani, dia nilaza tamin'ny fireneny mba tsy hanahy ny amin'ny virus milaza fa mijanona eo amin'ny Sinoa io olana io ary tsy hamindra azy ireo ka hirehareha amin'ny fandefasana sarontava tarehy hanampy an'i Shina. Ny praiminisitra italianina, Giuseppe Conte, dia nanala ny virus tamin'io volana febily io ary ny minisitry ny raharaham-bahiny italiana, Luigi Di Maio, dia niampanga ny media fa nanaparitaka vaovao diso momba ilay virus. I Italia no firenena fahatelo voan'ny aretina indrindra ary ivon'ilay valan'aretina nahafaty olona betsaka indrindra eran'izao tontolo izao (10 aprily 2020). Ny filohan'i Mexico, Andres Manuel Lopez Obrador, dia tsy niraharaha ilay fampitandremana ary namporisika ny olom-pireneny mba tsy ho resin'ny "tahotra na psychosis", manome tsiny ny haino aman-jery noho ny fikomiana korontana tamin'ny fanaparitahana vaovao diso. Mba hanaratsiana ny ratra dia nanome toky ny olom-pireneny Meksikana fa ny firenena dia manana ny kojakoja ara-pitsaboana rehetra sy ny fandriana hopitaly ilainy; na izany aza, tatitra iray no nahitana fa vitsy ny mpitsabo mpanampy sy fandriana ICU isan-kapita noho i Italia, Korea atsimo ary Etazonia. Tamin'ny aprily vao notapahin'i Lopez Obrador ny firenena ary nakatony ny sisintany. Ny praiminisitra Espana, Pedro Sanchez, dia nanala baraka ny vaovao ary namela ny fivoriambe mba hiroso amin'ny kianjan'ny fanatanjahantena sy ny famoriam-bahoaka ka hatramin'ny 120,000 no navela hiangona tamin'ny fihetsiketsehana feminista tao Madrid tamin'ny volana martsa. Nino ny praiminisitra Boris Johnson sy ny ekipany fa “risika antonony” io virus io hatramin'ny faran'ny volana febroary ary nihemotra tamin'ny fanapaha-kevitr'izy ireo hametraka fanidiana nasionaly.
Ny tsy fisian'ny fitarihana dia niteraka krizy eran'izao tontolo izao izay toa tsy voafehy raha tsy misy vahaolana mora na vahaolana mora azo (Data: hatramin'ny 25 Oktobra 2020; www.google.com/search)
Na dia fantatra tany Chine tamin'ny volana novambra / desambra 2019 aza io viriosy io dia tsy nampiharina ny famerana ny dia raha tsy ny volana martsa 2020, ary nijanona tamin'ny volana aprily sy mey ny dia iraisam-pirenena. Ny vokany? Ny World Tourism Organization (WTO) dia nanombana fa ny tapakila iraisan'ny fizahan-tany iraisam-pirenena (izany hoe ny fandaniana ataon'ireo mpizahatany iraisam-pirenena) dia hidina eo anelanelan'ny $ 910 tapitrisa - $ 1.2 trillion (2020), hamerina 20 taona ny indostrian'ny fizahantany manerantany (weforum.org). Misy fiatraikany amin'ny fiarahamonina ny fizahan-tany, manome vokany tsara sy ratsy miaraka amin'ny vokatra tsy irina nohamafisina nandritra ny krizy sy ny fitsapana. Satria ny faritry ny toekarena manerantany dia mifototra amin'ny fizahan-tany, manelingelina ny fiahiana ara-tsosialy sy ara-toekarena ny olom-pirenena eo an-toerana ary koa ireo mpiara-miasa manerantany.
COVID-19 dia namakivaky ny planeta niaraka tamin'ny fanampiana sy fanampiana ireo zotra fitsangantsanganana an-tsambo, seranam-piaramanidina, seranam-piaramanidina, fitateram-bahoaka ary koa hotely, ivon-toeran'ny fivoriambe, trano fisakafoanana ary faritra hafa amin'ny indostrian'ny fizahantany. Raha mahazo tombony amin'ny fizahan-tany miditra ny firenena, izy ireo koa dia miantsoroka ny fiatrehana ny fihanaky ny COVID-19 avy amin'ireo mpitsidika izay mifanerasera amin'ireo olom-pirenena sy tompona orinasa eo an-toerana. Ny mpitsidika marary ary / na mamindra ny hafa dia manery ny fitsaboana eo an-toerana, ny rafitra fiarovana sy fiarovana ny daholobe, ny fampitomboana ny vidiny (manokana sy ara-bola) ho an'ny fiarahamonina.
Tsy mandrefy ambony i Amerika
Rehefa nampijanona ny teratany vahiny nandeha avy any Chine ho any Etazonia ny governemanta amerikana tamin'ny 31 janoary 2020, dia tsy nahafa-po ny valiny satria fihetsika fotsiny io fa tsy ampahany amin'ny paikady eran-tany. Ny torolàlana dia nety ary nanomboka nahafahan'ny olona 381,000 4,000 niditra tao Etazonia avy any Shina tamin'ny volana Janoary, anisan'izany ny endrika XNUMX Wuhan. Ireo mpandeha dia nitohy nitanjozotra tsy nihambahamba nankany Etazonia avy amin'ireo firenena miatrika valanaretina mahery vaika (ie, Italia sy Espana) hatramin'ny volana febroary sy ny voalohan'ny volana martsa. Ny fizahana ara-pahasalamana any amin'ny seranam-piaramanidina no tena ezaka ho an'ny fifandraisana amin'ny besinimaro miaraka amin'ny serivisy vitsy (raha misy).
Ny tompon'andraikitra amin'ny sehatra tsy miankina sy tsy miankina dia naneho hevitra momba ny coronavirus toa ny tsy nampoizina, na dia teo aza ny fampitandremana efa ho 2 volana hatramin'ny nisehoany voalohany tany Shina ary nifindra erak'izao tontolo izao; na izany aza, raha tena hiresaka ifotony ny zava-misy isika, dia voina mialoha ny areti-mandringana taona maro talohan'ity fisehoan'ny krizy 2019/2020 ity.
Tamin'ny volana Mey 2003, ny Office Accountability Office (GAO) dia nitatitra fa, mikasika ny SARS sy ny areti-mifindra amin'ny ho avy dia misy banga ny rafitra fanaraha-maso ny aretina sy ny laboratoara ary ny tsy fahampian'ny mpiasa, ary “hopitaly vitsivitsy no manana fitaovana fitsaboana sahaza, toy ny ventilator … Hiatrehana fitomboan'ny isan'ny marary… ”
Tamin'ny taona 2005, ny departemanta misahana ny fahasalamana sy ny serivisy mahaolona (HHS) dia namoaka drafi-pandaminana Influenza Pandra 400 pejy. Famerenana ireo maodely mifototra amin'ny areti-mifindra gripa (1957, 1968) ary nanisa fa hisy hopitaly 900,000 mahery amin'ny toe-javatra mitovy amin'izany. Nofaritan'ny HHS fa hisy ny fitomboan'ny tinady amin'ny hopitaly sy ny tobim-pitsaboana matevina ary ny serivisy fanamoriana rivotra mihoatra ny 25 isan-jato. Ity tatitra ity dia narahin'ny tatitra GAO (2005/2006) hafa izay nampitandrina fa, "vitsy ny hopitaly no nitatitra fa manana fitaovana sy kojakoja ilaina hifehezana ny areti-mifindra lehibe."
Tamin'ny 2006, ny tatitra nataon'ny Biraon'ny Kaongresy tamin'ny Kongresy dia tsy nanana afa-tsy «ventilator» miisa 100,000 ao Etazonia, miaraka amin'ny ¾ ampiasaina amin'ny andro voatondro ary ny HHS dia nanisa izany, "areti-mandringana gripa mahery… toy ny… 1918..mba mila ventilator 750,00 hitondrana ireo traboina . "
Ny trano fotsy nataon'ny filoha George W. Bush (2001-2009) dia nanapa-kevitra fa ny areti-mandringana gripa mahery vaika dia hanisy enta-mavesatra eo amin'ny rafitra fitsaboana ary amin'ny taona 2007 dia namoaka drafitra Pandemi Influenza Plan izay manasongadina ny tsy fahampian'ny rivotra. Tamin'ny taona 2009, ny Sampana fiarovana sy fiarovana ara-pahasalamana (OSHA) dia naminavina fa, raha sendra areti-mifindra, dia hipoka ny tobim-pahasalamana, mitanisa ny tsy fahampian'ny mpiasan'ny hopitaly, ny fandriana, ny rivotra ary ny kojakoja hafa.
Ny filankevitry ny mpanolotsaina momba ny siansa sy ny teknolojia (2009) an'ny filoham-pirenena Barack Obama (1) dia nahatsikaritra fa nandritra ny tampon'ny gripa H1N1 dia 2 amin'ny 50 amerikana no mety ho hopitaly miaraka amin'ireo marary mila rivotra rivotra ary noho izany 100 - XNUMX isan-jato (na mihoatra) no ilaina (toeram-pitsaboana. governemanta).
Ny mpitarika tsy miankina sy tsy miankina amin'ny sehatra tsy miankina manerantany dia manohy ny fisainana Magical azy ireo, manitatra izany hatramin'ny fandavana fandaminana sarontava, fonon-tànana ary fanadiovan-tanana ho an'ny mpitsabo sy ekipa mpitsabo, milaza amin'ny manampahaizana, tompon'andraikitra amin'ny fanjakana sy ny tanàna ary koa ny vahoaka fa tsy ilaina izany. manahy, ho foana ny virus; na izany aza, na dia tsy hanjavona aza dia ampy ny famatsiana hamahana ny olana. Vao tsy ela akory izay, Mark Meadows, ny Lehiben'ny mpiasa ao amin'ny White House, dia nanambara fa "tsy hifehy" ny areti-mifindra coronavirus i Etazonia raha ny tranga mandeha manerana an'i Etazonia (25 Oktobra 2020). Ny fitondram-panjakana ankehitriny dia manohy tsy miraharaha ny torohevitra avy amin'ireo matihanina amin'ny fahasalamam-panjakana mba hisaron-tava, ny halaviran'ny fiaraha-monina ary hialana amin'ireo vondrona marobe amin'ny ezaka hanakanana ny firongatry ny aretina sy ny fahafatesan'ny olona.
Tourism? Fiatoana feno
Ny fikarohana dia manondro fa ny fihanaky ny areti-mifindra (izany hoe, SARS, gripa-kisoa, ary fery hemorrhagic virus / Ebola virus), amin'ny alàlan'ny fitsangatsanganan'ny olombelona dia nanjary loza lehibe indrindra amin'ny fizahan-tany satria mitarika amin'ny fandrarana ny fivezivezena iraisam-pirenen'ny olona izany. Ny COVID-19 dia niely tamin'ny alàlan'ny sambo fitsangantsanganana tany Japon, Etazonia, Aostralia ary Frantsa, ka nahatonga ny fandraràn'ny sambo mpitsangantsangana tsy hidona amin'ny seranana maro. Mampalahelo fa noho ny tsy fisian'ny fitarihana manan-talenta, ny valiny dia tsy haingana loatra na ampy tsara hanakanana ny fiparitahan'ny COVID-19 amin'ireo vondrom-piarahamonina notsidihina nandritra ny fitsangatsanganana amoron-dranomasina, ary ho an'ireo mpandeha hafa rehefa nandalo ny seranam-piaramanidina ireo mpandeha an-tsambo, nandeha tamin'ny zotram-piaramanidina, nisakafo tao amin'ny trano fisakafoanana ary niditra tamin'ny fitaterana an-tanety rehefa niverina tany an-tranony. Hatramin'izao, ny mpitantana ny sambo fitsangantsanganana dia manandrana misoroka ny zava-misy amin'ny COVID-19 sy ireo otrikaretina virosy hafa ao anaty sambony. Tombanana ho 200 eo ho eo ny olona maty isan-taona amin'ny sambo fitsangantsanganana (emmacruises.com/die-on-cruise-ships/) ary tsy ao anatin'izany ny areti-mandringana COVID-19 ankehitriny.
Ny areti-mandringana dia nanatsara ny fiankinan-tsika amin'ny governemanta rehefa misy "zavatra sarotra". Mampalahelo fa governemanta maro no tsy nahavita an'io asa io ary olona an-tapitrisany no marary sy maty tsy misy ilana azy nefa rava ny toekarena. Ny krizy aretin-tratra COVID-19 dia mampiseho ny vokatry ny tsy fahombiazan'ny fitarihana sy ny filana hananganana fifamatorana eo amin'ny sehatra miankina amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina; na izany aza, ny mbola tsy voafaritra dia ny andraikitra sy andraikitra tokony hananan'ny tsirairay ary ny fomba tokony hiarahan'izy ireo miaro ny vahoaka amin'ny krizy ara-pahasalamana amin'ny ho avy.
Tsy fahombiazan'ny sary an-tsaina
Ny fitarihana vahoaka sy tsy miankina ankehitriny dia tsy nahatakatra ny zava-misy fa ny teny sy izay voalaza, ary ny fomba sy ny fomba andefasana ny hafatra dia misy fiatraikany amin'ny hafatra voarainy sy arahana. Ny coronavirus dia niteraka korontana teo amin'ny sehatra manerantany, mitombo ny tsy fahatokisana, mampiakatra ny adin-tsaina sy ny fanahiana. Izy io koa dia nanampy ny fahitana ny tionelina, miaraka amin'ny olona mifantoka amin'ny fotoana fohy fa tsy mijery ho avy tsara. Rehefa misy ny krizy ary tsy misy ny fampahalalana, tsy mifanaraka na tsy mifototra amin'ny zava-misy, rehefa tsy mahazo antoka ny olona ary tsy mahazo antoka momba ny zavatra fantany, na izay fantatry ny hafa, na izay fantatry ny mpitarika azy ireo, dia misy ny faniriana mangarahara, fitarihana ary fanampiana arakaraka ny filaharany. hametraka indray ny fahatsapana fifandanjana; amin'ny sehatra manerantany, tsy misy io fitantanana io.
Ny fikarohana dia manome porofo fa mandritra ny fotoanan'ny krizy ny teny sy ny hetsika ataon'ny mpitarika dia afaka manampy amin'ny famoronana fahatsapana fiarovana, hery ara-pientanam-po amin'ny fiatrehana sy fametrahana ny traikefa amin'ny toe-javatra. Ao anatin'ny fotoana mampalahelo isika izay ny fampahalalana mifandraika amin'ny fahasalamam-bahoaka sy ny fiarovana ny toeram-piasana, ny fitohizan'ny asa, ny fahaverezan'ny asa ary ny fomba fiasa tsy mitovy amin'ny asa, sy ny fiainana, (tsy misy fijery farany), dia tsy notarihin'ireo mpitondra hendry fa ataon'ny olona izay mametraka ny fampiroboroboana manokana noho ny andraikiny hitarika ny mpiorina azy (na ny mpiasan'izy ireo) mankany amin'ny Next Normal. Mihabetsaka ny isan'ny olona manjavozavo noho ny krizy ankehitriny ka tsy vonona ny hahita fanantenana izy ireo amin'ny alàlan'ny fihetsika mahery setra mba hahitana rohy mankany amin'ny zava-misy.
Amin'ny Helm? Tsy misy olona!
Na dia tsy nitondra Playbook aza ny COVID-19 dia misy torolàlana fototra azo narahana (tokony ho) narahana, ary, raha tsy tamin'ny tranga vitsivitsy (izany hoe, ny praiminisitra New Zealand, Jacinda Arderm) dia tsy noraharahaina. Raha mbola misy fotoana hisian'ny fifandraisana tsara amin'ny besinimaro dia izao (ary) no fotoana tokony hanolorana ny hafatra mety hanome ny zava-misy momba ny areti-mandringana sy ny fanombanana ny loza mety hitranga ary hitarika ny olona amin'ny vokatra tsara. Raha tokony hanolotra ny hafatra marina amin'ny fotoana mety izy, dia nofenoin'ireo mpitantana voafidy sy notendrena ary tsy miankina ny onjam-peo tamin'ny honohono, lainga ary fahamarinana tsy mitongilana, izay mitarika ny olona marary, marary maharitra ary maty miaraka amin'ny toekarena milentika feno asa lehibe. , hanoanana ary rafitra fitsaboana tsy mahomby.
Ny fampahalalana ampahibemaso ataon'ny governemanta dia tokony hanatsara ny fahasahian'ny besinimaro sy ny fahavononany, hampitombo ny fahatsiarovan-tenany momba ny loza mety hitranga ary handrisika ny olona handray fiarovana mahomby hiadiana amin'ny areti-mandringana. Vantany vao nanaiky ny krizy ny governemantan'i Shina dia nanao zavatra marina izy ireo: nanolotra fampahalalana marobe momba ny areti-mandringana, nizara fifanakalozan-kevitra momba ny loza mety hitranga ary nanohitra ny tsaho. Ny fampahalalana sinoa COVID-19 izay nizara tamin'ny besinimaro dia nanolotra antontan'isa momba ireo tranga voamarina, tranga ahiahiana, tranga azo averina ary fahafatesany. Ankoatr'izay, ny PRC dia nanaparitaka angon-drakitra miaraka amin'ny fanavaozana isan'andro, ary izy ireo dia nanara-dia ny tantaram-pitaterana sy ny lamasinina na sidina nalain'ny marary voamarina na ahiahiana manokana ary nanome fitsaboana sy fanohanana hafa ho an'ireo olona ireo.
Ny fikarohana dia manamafy fa ny fampahalalana ampahibemaso ho an'ny daholobe dia mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny fitondran-tena miaro. Rehefa nampandrenesina ny trano fisotroan-dronono sinoa fa misy ny areti-mandringana sy izay ataon'ny governemanta manoloana izany dia nanaraka ny tolo-kevitry ny governemanta ny olona. Mampalahelo fa tsy mandeha foana ny fandefasan-kafatra. Mety tsy hatoky ny governemanta ny olona raha toa ka miafina na miseho endrika diso ny vaovao (na raha ny marina) ka mety hiteraka hetsika ratsy na fankahalana. Tsy tokony hahagaga raha tsy nahazo fitokisana mihoatra ny 50 isan-jaton'ny mponina amerikana sy ny ankamaroan'ny mpitondra eran-tany ny tompon'antoka ny White House ankehitriny. Notaterina tao amin'ny The Guardian (13 Jolay 2020) fa "Trump dia nanao fanambarana diso 20,000 na diso ..."
Raha tsy nahalala zavatra hafa avy tamin'ny COVID-19 isika, dia nifoha tamin'ny zava-misy fa ny fiaraha-monina, fa tsy ny governemanta ihany, dia mila miandrandra olana, ary amin'ny alàlan'ny famolavolana tranga "ahoana raha" mety, dia miomana amin'ny zavatra tsy ampoizina. Marina fa lafo ny fanaovana politika anticipatory ary mandany fotoana; na izany aza, raha nanana drafitra sy politika napetraka ny governemanta sy ny mpitantana ny fizahan-tany, dia azo inoana fa ho voalefaka ireo loza ankehitriny.
COVID-19 dia mitohy ny famonoana olona eran'izao tontolo izao fa indrindra any Etazonia izay misy olona an'arivony maro maty ary mahatratra +/- 32 isan-jato. Ny governemanta amerikana dia nandamoka ny olom-pireneny tamin'ny fomba ifotony sy miaro azy amin'ny loza mitatao. Navoaka ny viriosy ary tamin'ny alàlan'ny mpandeha no nahatratra mponina eran'izao tontolo izao ary tsy hita eo amin'ny latabatra ireo mpitantana ny fizahan-tany.
Na ny drafitra napetraka tsara indrindra aza dia tsy hahasakana ny areti-mandringana; na izany aza, mazava izao fa ny governemanta federaly miaraka amin'ny fanapaha-keviny sy ny fanapahan-keviny tsy mahomby dia nanova ny krizy ara-pahasalamana ho an'ny besinimaro ho lozam-pifamoivoizana, toe-karena ary fandriampahalemana mbola tsy nisy toa azy. Raha nisy mpitantana zotram-pitaterana an-tsambo sy zotram-piaramanidina, ary koa ireo mpandraharaha mpizahatany niaiky fa misy ny valanaretina ary niresaka momba ny viriosy rehefa niseho izy io, dia tsy ho lohalaharana amin'ny fahasimbana isika.
Azo inoana fa anisan'ny hoavintsika ny areti-mifindra. Ny valintenin'ny governemanta ankehitriny, raha hanao kely ary miandry azy hamono ny malemy indrindra, dia toa tsy valiny mahafa-po. Ireo mpitondra fizahan-tany dia mandà tsy hamaly ny tsy fahombiazan'izy ireo ary manohy mameno ny tambajotra sosialy miaraka amin'ny horonan-tsary sy sarin'ireo hotely misy mpampiandry dihy, mpiasan'ny seranam-piaramanidina manintona tsara manolotra cocktails ho an'ireo mpandeha kilasy sy toerana itodihana mampiseho vondron'olona vahiny falifaly (tsy misy elanelam-piaraha-monina na saron-tava) miketrika ny pisinina na mihomehy manodidina ny lavaka barbeque.
Tsy mazava ny lalan-kivoahana amin'ity quagmire ity. Ny fizahan-tany dia tompon'andraikitra amin'ny 10 isan-jaton'ny harin-karena faobe (2019) ary mitentina +/- $ 9 tapitrisa tapitrisa miaraka amin'ireo andiana mpamatsy sy mpanelanelana midadasika sy be pitsiny ary tsy misy fandrindrana eo amin'ireo orinasa kely sy salantsalany (SME). Ny famolavolana làlana mankany amin'ny fanarenana dia tsy ho tsotra na haingana satria tsy ampy ny fitarihana hitarika sy handrindra ny ezaka.
Inona no mety hitranga:
1. Fomba fiasa henjana kokoa - manomboka amin'ny fampisehoana fitsapana COVID-19 ratsy, hatramin'ny antontan-taratasy ara-pitsaboana hafa alohan'ny hiaingany.
2. Hitombo ny fahadiovana sy ny fahadiovana arahin'asa fanadiovan-tanana sy saron-tava takiana hatramin'ny fiandohan'ny dia ka hatramin'ny farany.
3. Ny fanarahana hentitra ny fombafomba momba ny fahasalamana dia ho zava-dehibe kokoa amin'ny mpandeha fa tsy ny mpiasa eo amin'ny latabatra manintona.
4. Ny rafitra haino aman-jery HVAC sy ny sivana HEPA dia hatao lohalaharana noho ny tahan'ny efi-trano.
5. Teknolojia tsy misy fikitihana, mamorona tontolo tsy misy tanana, manomboka amin'ny scanner antontan-taratasy sy ny baikon'ny feo ka hatrany amin'ny sensor sens, ny mpitsidika dia handray ny fotoana hivezivezena amin'ireo toerana sy toerana tsy misy fifandraisan'olombelona.
6. Ireo mpandeha dia hifindra am-pitandremana ary hijery ireo toerana lavitra sy lavitra halaviran'ny fiara ary hiala amin'ny fialan-tsasatra lavitra mandritra ny fotoana esorina ny fameperana ny dia.
Inona no ilaina:
Dwight David Eisenhower, filohan'ny USA 1953 –1961